के तपाईं एन्टिभाइरस किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् – ramechhapkhabar.com
के तपाईं एन्टिभाइरस किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
इन्टरनेटले जीवन सहज बनाउनका साथ साथै सूचना खतरामा पार्ने पनि गर्छ । वेबमा यस्ता ह्याकहरु छन् जसले तपाईको निजी जानकारी पाउन अवसर खोजिरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी डेटा हेर्दा कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुको निजी डेटामा २.३ ट्रिलियन पटक ह्याकरहरुले घुसपैठ गर्न खोजिसकेका छन् । सोनिक वाल नामक साइबर सुरक्षा फर्मको अनुसार गत साल भन्दा यो वर्ष १९ प्रतिशतले साइबर सुरक्षाको डर बढेको छ ।
यहि कारणले इन्टरनेटसँग जोडिएको डिभाइसलाई एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर एन्टिभाइरस किन्दा पनि कुन लिने, कस्तो किन्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईलाई चिन्ता लाग्न सक्छ । त्यही खुल्दुली मेटाउन आज हामीले हाउस्टफवर्क्समा प्रकाशित एन्टिभाइरस किन्दा के के कुरामा ध्यान दिने बारे जानकारी दिदैं छौं ।
पुरानो मोडेलको एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले सबै किसिमको ह्याकलाई रोक्न सक्दैन् । त्यही कारणले क्लाउड एन्टिभाइरस प्रोग्राम इन्स्टल गर्न एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले तपाईको कम्प्यूटर भन्दा राम्रो प्रोसेसिङ दिने गर्छ । यसले मालवेयरको समस्याहरुलाई सजिलै थाहापाउन पनि सक्छ । मालवेयरबाट राम्रो सुरक्षा दिने एन्टिभाइरसमा एउटा ‘टोटल एभी’ पनि हो जुन थुप्रै प्लेटफर्मका लागि उपलब्ध छ ।
तपाईको बजेट कम नै छ वा तपाईले धेरै कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुहुँदैन भने तपाइले एन्टिभाइरस प्रोग्रामको निःशुल्क भर्सननै छनोट गर्न सक्नुहुनेछ । विन्डोज पिसी हुनेले सजिलै तरिकाले विन्डोज टेन सँग आउने ‘विन्डोज डिफेन्डर एन्टिभाइरस’ एक्टीभेट गर्न सक्छन् । अर्को चर्चित एन्टिभाइरसमा ‘अभास्ट फ्रि एन्टिभाइरस’ पर्ने गर्छ जसले सुरक्षा अन्वेषकहरुबाट राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छ ।
यो विन्डोज, म्याक, एन्ड्रोइड र आईओएस डिभाइसका लागि उपलब्ध रहेको छ । तर भुक्तानी गर्नुपर्ने भर्सन लिन सकेमा त्यस्तो एन्टिभाइरसले अझै बढि फिचर दिन सक्छ । ‘बिटडिफेण्डर टोटल सेक्युरिटरी’ ले पेड भर्सनमा फाइल सेन्डिङ र वेबक्याम र माइक्रोफोनबाट सुरक्षाजस्तो फिचरहरु दिने गर्छ । एकपटक किनेपछि हरेक एक वर्षमा केही पैसा दिएर प्रोग्रामलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ ।